August 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
10:13:00 PM software No comments
Wondershare Photo Recovery ဒီကောင်လေးကတော့
• "Delete All" when deleting not-so-good photos
• Delete pictures instead of saving by accidentally pressing wrong button
• "Media/Drive is not formatted, would you like to format now?"
• Accidentally format the storage device
• Losing photos during transferring photos from storage devices to PC/laptop
• Any type of file system corruption in camera storage device, hard drive
Recover from All situations:
Deleted, Formatted, Erased, Corrupted and more;
Recover from All devices: Camera, Cell Phone, Memory Card, USB, PC, Mac, MP3, etc.
ဒီလောက်ဆိုရင် သူရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ပြောဖို့ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်..။
full version လေးဖြစ်အောင် patch ဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..။
IObit Driver Booster Beta 4.0
9:55:00 AM software No comments
IObit driver Booster Beta 4.0 လေးပါ..။အရင်က Beta 3.0 ကိုတင်ပေးဖူးပါတယ်..။အခု update လေးတွေ့လို့ ထက်တင်ပေးလိုက်တာပါ..။
ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးပါပဲ..။
Driver နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်..။ Freeware version လေးဖြစ်တဲ့အတွက် ကီးအတွက်လည်း စိတ်ညစ်စရာမရှိပါ..။
သူမှာပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့ ...
လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူ လိုက်ပါ..။
6:54:00 AM software No comments
windows 8 desktop မှာ Start Menu မပါ ပါဘူး..။ဒီတော့ ကျနော်တို့က Start Menu ကို သီးခြားထည့်သွင်းပေးရပါတယ်..။Start Menu မပါရင် ဘာပြသနာမှ မရှိပေမယ့် ရှိရင်တော့ ကြည့်လို့လှသလို သုံးရတာလည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်..။
အခုကျနော်တင်ပေးမဲ့ ဟာလေးကလည်း လက်ရှိကျနော် သုံးနေတာ အဆင်ပြေလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးတာပါ..။
ပုံမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း သူ့ရဲ့ Start Menu စတိုင်တွေကလည်း အတော်စုံလင်ပါတယ်..။
အဲဒီထဲက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံလေးကို ရွေးယူပေါ့ဗျာ..။
လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Advanced SystemCare7Beta 2.0
2:51:00 AM software No comments
ဒီကောင်လေးက ဘာကောင်းတယ် ညာကောင်းတယ်ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် လူသိများပါတယ်..။
အရင်က Advanced SystemCare7Beta 1.0 ကိုတင်ဖူးပါတယ်..။
အခု ဒီအသစ်မှာဘာတွေပါလဲ ဆိုတော့
+ Added easy-to-read white skin to meet more users' needs.
2:33:00 AM software No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ Windows Media Player ရဲ့မိတ်ဖက် player လို့ပြောမယ့်ဟာလေးပါ..။နောက်ဆုံးထွက်လေး ပါ..။
ကွန်ပျူတာမှာ ဒီကောင်လေးထည့်ထားရင် ဘယ်လို Media format ဖြစ်ဖြစ် Windows Media Player နဲ့ဖွင့်လို့ ရသွားမှာဖြစ်သလို ဒီK-Lite Codec Pack Player နဲ့ ဖွင့်လို့ ကြည့်လို့ ရသွားမှာပါ..။
install လုပ်တဲ့နေရာမှာ ..
ဒီအဆင့်ရောက်ရင် Windows Media Player ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လေး ပေးထားလိုက်ပါ..
ဒီမှာလည်း select all video select all audio ကို ရွေးပေးရပါမယ်..။
select all video select all audio ကို ရွေးပေးရပါမယ်..။
အဲဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာမှာ ဖွင့်လို့မရတဲ့ Media format မရှိနိုင်တော့ပါဘူး..။
အားလုံး ကို Windows Media Player နဲ့ ဖွင့်လို့ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်သလို
ဒီK-Lite Codec Pack Player လေးနဲ့လည်း ဖွင့်လို့ရသွားမှာပါ..။
လိုအပ်ရင်K-Lite Codec Pack 10.00 (Full) ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Ccleaner Professional & Bussiness Edition V4.05.4250
7:58:00 AM software No comments
ကွန်ပျူတာ သွက်လက် ပေါ့ပါးစေတဲ့ software တွေထဲမှာ ဒီCcleaner Professional & Bussiness Edition လောက်ကောင်းတဲ့ software ရှိမယ်မထင်ပါ..။အရင်ကလည်း Ccleaner ကိုတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်..။အခုလည်း update လေးတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
-Internet Explorer-Firefox -Google Chrome -Opera -Safari -Windows - Recycle Bin, Recent Documents, Temporary files and Log files. -Registry cleaner -Third-party applications
What's new in this version:-Added Windows Server 2012 R2 Preview support. -Added Windows Event Log cleaning. -Updated Intelligent Cookie Scanning. -Improved behavior when removing System Restore points. -Improved Windows XP last download location cleaning. -Enhanced the file finder function keyboard navigation. -Improved privacy data cleaning for multiple users in Internet Explorer 11 (CCleaner Professional). -Improved the time interval options for system monitoring (CCleaner Professional). -Updated exception handling and reporting architecture. -Added Adobe Premier Pro CC, OpenOffice 4, CuteFTP 9, and Directory Opus 10 cleaning. -Improved Foxit Phantom PDF and QuickTime cleaning. -Minor GUI improvements and bug fixes.
Professional Edition ဒါမှမဟုတ် Bussiness Edition လေးဖြစ်ဖို့ Cracker ကိုအသုံးပြုရမှာပါ..။
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ccsetup405.exe ဖိုင်လေးကို ပုံမှန်အတိုင်းပဲ install အရင်လုပ်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် သူ့ကို မ run ပါနဲ့ ..။ cracker ဖိုင်လေးကို ပုံမှန် install လုပ်သလိုပဲ run လိုက်ပါ..။
C:\_Program Files\_CCleaner ဆိုတာမေးရင် ok လိုက်ပါ..။
Ccleaner Professional & Bussiness Edition ကိုနှစ်သက်ရာ ရွေးပြီး Next click ပါ..။
ပြီးရင် ok ပေါ့ဗျာ..။အဲဒါဆိုရင်
အခုလို Ccleaner Professional ဒါမှမဟုတ် Bussiness Edition V4.05.4250 လေးရပြီပေါ့ဗျာ..။
လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
1:52:00 AM software No comments
Windows7Starter and Home Basic မှာ Personalization Panel က အဆင်သင့်ပါမလာပါဘူး.။
Personalization Panel မပါလာတဲ့အတွက် desktop background slide show လုပ်လို့ အဆင်မပြေတာ folder name မှာ မြန်မာလို့ ပေးထားရင် အတုံးတုံးလေးတွေ ဖြစ်နေလို့ အလွယ်တကူ ပြင်လို့မရတာ ။ ဒါ့အပြင် Personalization ရဲ့ အသုံးဝင်မှုတွေက မနည်းလှပါဘူး။အဲဒါတွေအတွက် Personalization Panel လေးပါဝင်လာအောင် ဒီ software ကို double click လေး run ပေးလိုက်ယုံနဲ့ Windows7Starter and Home Basic မှာPersonalization Panel ရရှိမှာပါ..။
windows7iso လိုချင်သူများအတွက်
11:41:00 PM windows 1 comment
windows7iso လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ.။
သုံးမျိုးလုံးအတွက် 32 bit and 64 bit ပါ..
32 bit ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
64 bit ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
ဒေါင်းဖို့အတွက် (ဒီမှာ)ကို နှိပ်ပြီးရင် စက္ကန့် လောက်စောင့်ပြီး
ညာဘက်ထောင့်က SKIP AD ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။ အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
DriverEasy Professional v4.5.2.21601
11:10:00 PM software No comments
DriverEasy Professional v4.5.2.21601 .ဒါလေးကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်တဲ့
Driver တွေကို သူဘာသာသူ ရှာဖွေဒေါင်းယူပြီး ။ ကွန်ပျူတာမှာ အမြဲတမ်း
Driver up to date ဖြစ်အောင်ကူညီနိုင်ပါတယ်..။
Automatically Detect, Download, Backup, Restore and Uninstall Drivers on your computer.
Fix your Driver Issues.Automatically Detect Unknown Device DriversKeep your Drivers Up-to-DateOver 1,000,000 Hardware Driver DatabaseDriver Backup, Restore & Uninstall Features Download Windows Update 2x ~ 5x FasterFREE for Personal UseMulti-Language Interface Extremely Easy-to-Use
Professional version ဖြစ်ဖို့ Keymaker လေးထည့်သွင်းထားပါတယ်..။
သူကိုအသုံးပြုဖို့ keymaker ဖိုင်လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ..အဲဒီအထဲက Keymaker.exe ဖိုင်ကို
double click လိုက်ပါ..
ပုံထဲကအတိုင်း ဖြည့်ပြီး Generate ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ..။Username မှာတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ထည့်ပေါ့..လိုအပ်ရင် DriverEasy Professional v4.5.2.21601 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
TeamViewer 8.0.19617 Premium Full Version
5:54:00 PM software No comments
TeamViewer 8.0.19617 Premium ဒီကောင်လေးက ဘာတွေ အသုံးဝင်တယ်ဆိုတာ ကတော့ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်..အလွယ်ပြောရရင် network ရှိတယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ တလုံးကနေ တလုံးကို ၀င်ကြည့်လို့ ရတယ်ပေါ့ဗျာ..
TeamViewer is the best tool for remote control over any PC where we have internet connection. It uses an extended international server network with server locations in many countries all over the world. Best part of the TeamViewer which I liked the most is No installation is required. All we need is to just run the application and enjoy the work.
သူမှာပါဝင်တဲ့ Features တွေကတော့...
Works behind Firewall.
full version ဖြစ်ဖို့ Activator လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..
5:33:00 AM software No comments
IDM 6.17 Build 8 ပါ.. ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
ပြီရင် patch ဖိုင်လေးကို run လိုက်ပါ..။ patch အသုံးပြုပုံကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ.။
Internet Download Manager 6.17 Build ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Chating Facebook Smiley Code
11:25:00 PM နည်းပညာ No comments
Chating Facebook Smiley Code လေးတွေကို ဗဟုသုတ အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။
Internet speed ကို မြှင်တင်ကြည့်ရအောင်
11:09:00 PM နည်းပညာ No comments
ဆော့ဝဲ မသုံးပဲ notepad ကို သုံးပြီး Internet speed ကိုမြှင်ကြည့်ရအောင်
အရင်ဆုံး notepad ကို ဖွင့်လိုက်ပါ..
ပြီးရင် အောက်က ပေးထားတာတွေ ကို copy လုပ်ပြီး
notepad ထဲမှာ paste လုပ်ပေးလိုက်ပါ..။
"[HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_Curr entControlSet\_Servic es\_Tcpip\_Parameters]
ပြီးရင် file name မှာ speed.reg. အမည်နဲ့ save လိုက်ပါ..။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း reg ဖိုင်လေးတခု ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီဖိုင်လေးကို Double click ပေးလိုက်ပါ..။
အဲဒီလိုပေါ်လာရင် yes ကိုရွေးပေးလိုက်ယုံပါပဲ..။
ပြီးရင် Internet speed ပုံမှန်ထက် increase ဖြစ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။
6:14:00 AM software No comments
DriverPack Solution 13 R320 Final Full Version..ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်တဲ့ Driver ပြသနာတွေကို အလွယ်ကူဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်တာလေးမို့ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။ Windows တင်မယ်ဆိုရင် ကွန်ပျူတာ ၀ယ်စဉ်ကပါလာတဲ့ Driver CD မရှိတော့ဘူးဆိုရင် ..Driver ပြသနာဟာ အချိန်အတော်ယူ ဖြေရှင်းရပြန်ပါတယ်..။
သူကတော့ ကွန်ပျူတာမှာ လိုအပ်တဲ့ Driver အားလုံးကို auto install လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်..။
ကွန်ပျူတာနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ သူတိုင်းဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..။
This software automatically detects the hardware of your system and set the drivers for it. Best part of this software is that to do all this,
you don't even needainternet connection or you need not to connect with the internet. I will do all for you. Operating system supported by DriverPack Solution are Windows XP, Vista 7and 8 both in 32 as well as 64 bit.
If you have this software, all you need is to run it and forget about any missing driver. It will be done by DriverPack Solution.
အပိုင်း ၅ ပိုင်းရှိပါတယ်..။ ၅ ဒေါင်းပြီးရင် အပိုင်းတစ်ကို Right click ပေးပြီး Extract here လုပ်ပြီး ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ..။ ရလာမဲ့ ISO ဖိုင်လေးကို DVD Burn လိုက်ရင် Driver အတွက် ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး..။
အပိုင်း ၁ ကို ဒီမှာ
အပိုင်း ၂ ကို ဒီမှာ
အပိုင်း ၃ ကို ဒီမှာ
အပိုင်း ၄ ကို ဒီမှာ
အပိုင်း ၅ ကို ဒီမှာ
Windows Loader 2.1.8 + WAT Fix
4:14:00 AM software No comments
windows Loader 2.1.8 + WAT Fix ..လေးပါ။ ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာ သုံးစွဲသူအများစုကတော့ copy windows နဲ့ပဲ နှစ်ပါးသွားနေကြရတော တခါတရံမှာ windows genuine ပြသနာနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်..။
ဒီတော့ copy windows သုံးစွဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့ windows genuine ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Windows Loader လေးကို အမြဲဆောင်ထားသင့်ပါ..။
အခုကျနော်တင်ပေးထားတဲ့ windows Loader 2.1.8 + WAT Fix ကတော့ windows genuine ပြသနာကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်..။ ဆောင်ထားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်
လိုအပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
4:21:00 AM software No comments
Camtasia.Studio. ဒီကောင်လေးကတော့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Screen Recording and Video Editing Software လုပ်တဲ့ software လေးပါ..။လွယ်လွယ်ပြောရရင် ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ်အသုံးပြုနေတာတွေကို Video Record လုပ် ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာ...။
တို့ပါပဲ..။ အသုံးပြုရတာကလည်း လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်..။
လေ့လာချင်ရင် သူ့ရဲ့ မှုရင်း ဆိုဒ်က ဒီမှာ ပါ..။
Camtasia.Studio.8.1.2. Build.1327 ကို လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
full version လေးဖြစ်ဖို့ ကီးဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်..။
ကီးထည့်တဲ့ အချိန်မှာ internet connection ကို
ခဏလောက် Disconnect လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့..။
5:16:00 AM software No comments
6.17 Build7ပါ.. ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17 Build7ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
8:06:00 AM software No comments
windows Administrator password မေ့သွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတခုခုကြောင့် ၀င်လို့ မရတော့လို့ Administrator password reset ချချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Hirens Boot CD က အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်..။Hirens Boot CDကို သုံးပြီး windows Administrator password reset ချနည်းကို နောက်မှ ကျနော်သေချာရေးပါအုန်မည်..။အခု Hirens.BootCD ကို လိုအပ်နေသူများ အခု ဒီမှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
8:28:00 PM software No comments
Revo Uninstaller Pro 3.0.5 ..Uninstaller တွေထဲမှာတော့ ကျနော်အနှစ်သက်ဆုံးပါပဲ..။
ဘယ်Uninstaller နဲ့မှ ဖြုတ်မရတာတွေကို သူနဲ့တွေ့ရင် လစ်သွားရတာပါပဲ..။
ကျနော်တို့ မကြာခဏ ကြုံရလေ့ရှိတာက software အဟောင်းကို ဖြုတ်ပြီး အသစ်ကို ပြန်သွင်းတဲ့ အခါအဆင်မပြေတတ်တဲ့ ပြသနာပါပဲ..Nero တို့ microsoft office တို့ အဆိုးဆုံးကတော့
Antivirus ပါပဲ..။ ဒီပြသနာတွေကို ဒီကောင်လေးက ကျော်လွှားပေးနိုင်ပါတယ်..။
pro version ဖြစ်အောင် patch ဖိုင်လေး ထည့်ထားပါတယ်..။
အဲဒီနေရာမှာ အ၀ါရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ patch ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး C:\_Program Files\_VS Revo Group\_Revo Uninstaller Pro ရွေးပေးလိုက်ပါ..။ပြီးရင်ကျလာတဲ့ box ထဲမှာ ကိုယ်နာမည် ရေးပြီး ok ကို click ယုံပါပဲ..
ဒါဆိုရင် pro version လေးဖြစ်သွားပါပြီ..။
7:58:00 PM software No comments
PC Cleaner Pro 2013 v.10.11 ..ကွန်ပျူတာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲ တွေထဲမှာ နာမည်ရှိတဲ့ ကောင်လေးပါ..။
သူ့မှာပါဝင်တဲ့ Feature တွေကတော့
တို့ပါပဲ..pro version လေးဖြစ်အောင် ကီးဖိုင်လေးပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်..
ကီးထည့်တဲ့ အချိန်မှာ internet connection ကို ခဏလောက် Disconnect လုပ်ထားပေးပါ..။
MicroSD Card Recovery Pro v2.9.9 Final
5:39:00 AM software No comments
MicroSD Card Recovery Pro v2.9.9 Final version လေးပါ..။SD ကဒ်ထဲက မှားပြီး ဖျက်မိတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် format ချမိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကောင်လေးက ပြန်လည်ဆယ်ယူပေးနိုင်ပါတယ်..။
Pro version ဖြစ်အောင် ကီးဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်..။အသုံးပြုနည်းကတော့ လွယ်ကူလို့ မရေးတော့ပါဘူး..။ install လုပ်နည်းကတော့ ဒေါင်းလို့ရတဲ့ ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးရင် အခုလိုပေါ်နေပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီမှာ install now ကို နှိပ်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း install လုပ်ယုံပါပဲ..။
Bitdefender Total Security 2014 32bit
8:14:00 AM antivirus No comments
Bitdefender Total Security 2014 ပါ..။windows 8 နဲ့ လည်းအလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ..။
License ကတော့ အနည်းဆုံး ရက်၉၀ ရပါတယ်..။Antivirus ထဲမှာတော့ အကောင်း လူကြိုက်အများဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Torrent ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ
7:09:00 AM နည်းပညာ No comments
အများစုက torrent ကိုမသုံးတတ်ကြပါဘူး..။download ဆွဲဖို့ဆိုရင် IDM ရှိရင် လုံလောက်ပြီ ထင်တတ်ကြတယ်..။ ဒါပေမဲ့ တခါတရံမှာ Windows OS တွေ photoshop တွေ Latest ဖြစ်တဲ့ software
တွေ HD movie တွေကို download လုပ်ချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ torrent က အခြား downloader တွေထက် ပိုပြီးအားသာချက်တွေ ပိုများပါတယ်..။
ဒါဆိုရင် torrent ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ???
အရင်ဆုံး uTorrnet last version လေးကို ဒီမှာ ယူပြီး ပုံမှန်အခြား software တွေကို install လုပ်သလိုပဲ စက်ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ..။ပြီးရင်....
google မှာ torrent search လို့ ရိုက်ပြီး torrent search engine ကိုသွားလိုက်ပါ..။
အဲဒီကိုရောက်ရင် ကျနော်မြှားနဲ့ ပြထားနေရာမှာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရိုက်ထည့်ပါ..။
(ဥပမာ) ပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ man လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် သူ့အမည်ရှိရာတွေ ကျလာပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီမှာ win လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ သူနဲ့ ပါတ်သတ်တာတွေကျလာပါမယ်..။ အဲဒီမှာ ကျနော်က windows 8 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်..။
ကျလာတဲ့ windows 8 နဲ့ ပါတ်သတ်တာတွေအထဲက ကျနော်ရွေးထားတဲ့ဟာကို မြှားနဲ့ ပြထားပါတယ်..။
အဲဒီမှာလည်း ကျနော်ရွေးတာကို မြှားပြထားပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာ Download Torrent ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်..။
open with မှာ utorrent (default) ကိုရွေးပြီး ok ကို နှိပ်လိုက်ပါ..။
အဲဒီလိုကျလာရင် ကိုယ်မလိုချင်တာကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီး ok ..
အဲဒီမှာ တွေ့ရတဲ့ အတိုင်း Torrent က သူဘာသာ သူ download လုပ်နေတာတွေ့ရပါမယ်..။
သူ့ program ကို ပိတ်ထားရင်တောင် နောက်ကွယ်ကနေ ဆက်ပြီး download လုပ်နေပါလိမ့်မယ်..။
သူ့ဒေါင်းလို့ မပြီးခင် ကွန်ပျူတာ ပိတ်ပြီး နောက်ရက်မှ ဆက်ဒေါင်းလည်း ရပါတယ်..။
ဒီလောက်ဆိုရင် Torrent ကို အသုံးချတတ်မယ်ထင်ပါတယ်..။music တွေ movie တွေကိုလည်း
torrent search engine ကနေတဆင့် ရှာဖွေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
6:59:00 AM software No comments
IObit driver Booster Beta 3.0 လေးပါ..။ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲ လေးပါပဲ..။
Simple and Easy to Understand Interface ...
Ccleaner Professional & Bussiness Edition V4.05.42...
Personalization Panel for Windows7Starter and Ho...